သင်ဟာ ရုရှားကို ခရီးသွားပြီး ဘာဂါအချို့ စားချင်တယ် ဆိုပါဆို့ ။ ဒါဆို သင်ဟာ စည်သွတ်ဘူးထဲ ထည့်ထားတဲ့ တူနာ ငါးတွေနဲ့ ငါးသလောက်တွေကို သင့်ရဲ့ sandwich ထဲမှာ ထည့်စားဖို့အတွက် သင်ဝယ်ချင်မိမှာပါပဲ ။ ဒါဆို ဒီလို စည်သွတ်ဘူးမျိုးလည်း ၀ယ်သွားပါဦး ။ မြင်ရတာနဲ့တင် ကြက်သီးထလွန်းလို့ ။ ဒါကို Atlantic Herring လို့ခေါ်ပါတယ် ။
အစားသောင်းကျန်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ထူးထူးဆန်းဆန်း အစားအသောက်တွေကိုမှ နှစ်သက်တဲ့ သူငယ်ချင်း တွေအတွက် အတ္တလန္တိတ် ငါးသလောက် စည်သွတ်ဘူးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်ကတော့ သူ့လက် ချောင်းလေးတွေကို အသည်းယားလို့ မစားတော့ပါဘူး ။ စားချင်သူများရှိရင် သွားရောက်ဝယ်ယူ စားသုံးနိုင်ပါတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 10:18 AM
သမီးကြီး April 19, 2010 at 11:18 AM
အဲဒါ လက်သည်းတွေလား? သွားတွေလာဟင်? အသည်းယားစရာပါ။ အမကတော့ ငါးမကြိုက်ဘူး။ ဒါကြောင့် စားချင်ဘူး။ :)
အဖြူရောင်နတ်သမီး April 22, 2010 at 7:09 PM
စားမယ့်သူကို သူက လက်သဲတွေထုတ်ပြထားမှတော့ စားရဲပါတော့မလား၊ ကြည့်ရင်းနဲ့တောင် ကြက်သီးထစရာ...
a dar teeth taoy ma hote lar . so scared..P